Faahfaahin: Dagaalkii saaka ka dhacay Koonfurta Gaalkacyo – Radio Daljir
Faahfaahin: Dagaalkii saaka ka dhacay Koonfurta Gaalkacyo
Juunyo 27, 2021 9:13 b 0
Wararka naga soo gaaraya koonfurt magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya in dagaal xoogan oo u dhexeeyay Ciidanka Daraawiishta Maamulka Galmudug, dadka deegaanka iyo Al-shabaab saaka waaberigii hore uu ka dhacay deegaanka Wisil ee waqooyiga Gobolka Mudug.
Dagaalkan ayaa ku bilowday qarax ayaa lagu qaaday saldhig ciidanka daraawiishta Galmudug ku leeyihiin gudaha Wisil, iyadoo halkaasi dagaal toos ah uu ka bilowday.
Wararka waxa ay sheegayaan in dagaalka la isu adeegsaday hubka culus isla markaana uu sababay qasaare labada dhinac soo kala gaaray.
Saraakiil u hadashay maamulka Galmudug ayaa sheegay inay iska caabiyeen weerarka ay ku soo qaadeen Alshabaab ayna khasaare xoog leh gaarsiiyeen.
Al-shabaab ayaa dhankeeda sheegtay in weerarkii ay ku qaadeen Saldhiga Ciidanka Daraawiishta Galmudug ee Wisil ay ku dileen 34 Askari, ayna ku qabsadeen gaadiid dagaal.
Kenya: Dad loo soo qabtay Afduubkii Nayroobi loogu geystay gabdho Soomaaliyeed